America Archives • Drugs Inc.
Astaanta daabacaadda Mareykanka ee Playboy waxay noqotay sumaddii ugu dambeysay ee caalami ah ee soo gasha suuqa sii kordhaya ee CBD. Shirkadda ayaa…
Hadda marijuana waxay sharci ka heshay dalal dhowr ah iyo gobollo badan oo Ameerika ka tirsan, isticmaalka xashiishku wuxuu ...
Qiyaastii 40 milyan oo qaan-gaar ah oo Mareykan ah ayaa la soo daristay walaac. CBD waxay wax weyn ka tari kartaa yareynta welwelka, iyo sidoo kale dhibaatooyinka hurdada iyo ...
5 Siyaabood oo Marijuana Caafimaad ah ayaa kaa caawin kara inaad la qabsato Xanuunka daba-dheeraada
Kuwa la halgamaya xanuunka dabadheeraad, cannabis daawo ayaa badanaa loo arkaa inay tahay bedel ka aamin badan kuwa dawooyinka xanuunka loo qoro. Halkan joog…
Waa maxay farqiga u dhexeeya Marijuana CBD iyo Hemp CBD?
In kasta oo saliidda CBD iyo hemp saliiddu labaduba ay ka kooban yihiin THC hoose, haddana farqiga u dhexeeya xaddiga CBD ee alaabooyinkan ay leeyihiin ayaa aad u weyn.…
Shirkadda cannabis Canadian-ka ah ee loo yaqaan 'Cronos cannabis' ayaa soo qortay khasaare hawlgal ah oo gaadhay $ 31,3 milyan rubucii labaad
Shirkadda cannabis ee saldhigeedu yahay magaalada Toronto ee lagu magacaabo Cronos Group ayaa soo werisay in $ 31,3 milyan ay ka luntay rubucii labaad, oo ay weheliso $…